Etazonia: Ho esorina tsy ho ela ny fandraràna ny fivahinianan’ireo mitondra ny tsimokaretina VIH ? · Global Voices teny Malagasy
Etazonia: Ho esorina tsy ho ela ny fandraràna ny fivahinianan'ireo mitondra ny tsimokaretina VIH ?
Voadika ny 06 Aogositra 2019 19:44 GMT
Vakio amin'ny teny Filipino, Français, 繁體中文, 简体中文, македонски, বাংলা, Español, English
Ny herinandro lasa teo, natomboky ny governemanta amerikàna ireo dingana farany ilaina amin'ny fanesorana ireo fepetra naharitra ela momba ireo fivezivezena sy fifindramonina neterena ho arahan'ireo vahiny mitondra ny tsimokaretina VIH.
Araka ny fandraràna efa mihatra [teny anglisy, tahaka ireo rohy rehetra ato anatin'ity lahatsoratra ity], ireo vahiny mitondra ny tsimokaretina, na tonga hizaha tany izy na hanao fandraharahàna, dia tsy afaka miditra ao Etazonia, na misy aza ireo antony manokana azo anomezana fahazoandàlana. Ity politika ity, nipetraka efa maherin'ny 15 taona izay, dia manakana ihany koa ireo mpifindramonina mitondra ilay viriosy hanjary tsy ho lasa mponina ara-dalàna. Izany dia voazavan'ny fiheveran'ny departemanta Amerikana misahana ny fahasalamana sy ny asa sosialy (HHS) ilay viriosy ho anisan'ny ampahany amin'ireo “areti-mifindra goavana raha resaka fahasalaman'ny daholobe”, izay manakana ireny olona ireny tsy hiditra ao Etazonia. Saingy tamin'ny herinandro lasa teo, ilay minisitera voalaza ery ambony (HHS) dia nanolotra fepetra izay manala ny VIH tsy ho ao anatin'io lisitry ny areti-mifindra io.
Marobe ireo mpikatroka sy ireo blaogera no nankasitraka an'ity fandraisana andraikitra ity satria ahafahana manomboka dingana natao hanafoana ilay fandraràna izy io. Ohatra hoe, manoratra i Erin eo amin'ny blaogy an aspiring midwife :
« Tsy maintsy niandry ny taona 2009 mba hanafoanan'ny governemanta ny iray tamin'ireo lalàna tena manavakavaka indrindra nampiharina nandritra ireo roapolo taona farany »
Ny dingana voalohany nankamin'ny fanesorana ilay fandraràna dia nitranga tamin'ny volana Jolay lasa teo rehefa nosoniavin'ny Filoham-pirenena George W. Bush ny volavolan-dalàna iray misy ny fanitsiana izay nanafoana ilay fandraràna. Saingy mbola nanan-kery hatrany izy io satria mbola hita taratra tao anatin'ny lisitr'ireo areti-mifindra hatrany ny viriosy VIH, nahafahan'ireo tomponandraikitra Amerikana nisakana ireo mitondra ny tsimokaretina tsy hiditra ao amin'ny firenena. Tamin'ny volana lasa, ohatra, ilay Britanika mpikatroka, Paul Thorn, mitondra ny tsimokaretina dia nosakanana tsy hahazo vizà raha toa nikasa ny handray anjara tamina fivoriambe iray tany Seattle. Mametraka ilay fandraràna ao anatin'ny vanimpotoana manodidina izany ity lahatsary ity.
Raha toa ireo firenena samihafa erantany manana fepetra mikasika ny fizahantany na ny fifindramonina ho an'ireo mitondra ny tsimokaretina, i Etazonia kosa no iray amin'ireo firenena tsy fahita firy manana ity karazana politika mpamepetra ity ho an'ny fidirana tsotra ao aminy. Mamelabelatra ny blaogy DYM SUM manao hoe:
“Fanamarihana mahaliana: firenena ampolony monja erantany, miampy an'i Etazonia, no mbola manana fandraràna manankery mikasika ny fizahantany ho an'ireo mitondra ny tsimokaretina. Dia i Iràka, Sina, Arabia Saodita, Libia, Sodàna, Katara, Brunei, Omàna, Moldavia, Rosia, Armenia ary i Korea Atsimo. Raha ilaina, avereno vakiana ity lisitra ity ary eritrereto izay tsy mety.”
Ho fanehoankevitra amin'ilay vaovao, zarain'ireo blaogera ny zavatra niainan-dry zareo ny fikasan'izy ireo hiditra an'i Etazonia na ireo stratejia henon'izy ireo hoe ahafahan'izy ireo miala amin'ilay fandraràna tsy hivezivezy. Ohatra amin'izany, The Evolution of Jeremiah, blaogy kanadiàna iray, manambara fa:
“Tsy nanana olana mihitsy aho tamin'ny fidirana tao Etazonia. Tsy nisy olona nanontany ahy sady tsy ilain'ny olona ho fantatra. Vaovao tsara io ho an'ireo mpivezivezy manerana izao tontolo izao. Enga anie ka hihatra haingana araka izay mety io.”
Bobito, naneho hevitra taominà lahatsoratra iray nivoaka teo amin'ny Queerty, manazava hoe karazana stratejia hafa toy ny ahoana no noraisin'ireo mitondra ny tsimokaretina:
Araka izay nolazaina tamiko, raha toa ny sampandraharahan'ny fadintseranana Amerikana mahita fanafody fiarovana amin'ny viriosy any anatin'ny entan'ny mpandeha iray, tsy avelan'izy ireo hiala ny seranam-piaramanidina akory izy io. Misy ireo fomba azo hialàna amin'io tranga io, toy ny fandefasana an'ireo fanafodiny any amin'ny namana iray any Amerika mialohan'ny handraisana fiaramanidina, ary heveriko fa hanampy azy ireo amin'izany ihany koa ireo fikambanana sasantsasany miaro an'ireo mitondra ny tsimokaretina.
Novakiako ihany koa fa raha toa misava anjoanjo ireo entana ry zareo ka mahita fanafody fiarovana, asian'izy ireo marika HIV+ eo amin'ny pasipaoron'ilay mpandeha, ka ho voasakana avokoa ny fikasàna amin'ny hoavy mba handeha any amin'ireo firenena izay mandà ireo mitondra ny tsimokaretina, saingy tsy fantatro intsony hoe taiza no namakiako an'izay.”
Tatitra iray navoakan'ny Human Rights Watch tamin'ny volana Jona no mamaritra ireo vokatra izay mety aterak'ireo politika ireo amin'ny fahasalaman'ireo mpifindra monina mitondra ny tsimokaretina. Ny blaogy Empowerment for HIV Positive Migrants and Spouses, (Fampaherezana irao mpifindra monina mitndra ny VIH sy ny vasinny) any Malezia, milaza ihany koa izay loza mety aterak'ireo fandraràna ireo. Ambarany fa:
«Ireo hevitra diso sy ireo fanavakavahana mikasika ny VIH azo avy amin'ny tsy fahampiam-baovao no vao mainka manala baraka an'ireo olona miaina miaraka amin'io viriosy io. Ireo olona mivezivezy any amin'ireny firenena mandrara ireny dia manana fironana hampiato ny fitsaboana azy ireo (fitsaboana antirétrovirale) mba hialàna amin'ny fandraràna tsy hiditra any. Niteraka fanoherana ny fitsaboana ity fepetra ity…
…Tokony ho tsaroan'ny firenena rehetra fa ireo Fanjakana mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana dia samy nanao sonia ny fepetra iraisam-pirenena mikasika ny fahasalamana, izay tsy manavaka na aretina inona na aretina inona, na dia ny VIH aza. Io fitsipika io no no tokony ho taridalana ao anatin'ny fandresena lahatra mba hisian'ny fitsaboana ao anatin'ny firenena iray. Ireo firenena tò teny toa an'i Etazonia sy i Sina no tokony ho lohalaharana amin'io sehatra io ary ho modely ho an'ireo firenena hafa rehefa tena hanàla tanteraka an'ireo fandraràna izy zareo.”
Ankehitriny rehefa navoakan'ny HHS ireo sosokeviny ho fitsipika, hisy fotoana 45 andro izay hifarana amin'ny faran'ny 17 Aogositra, mandritra izay fotoana izay no hahafahan'ny daholobe maneho hevitra. Raha toa ka lany ireo fitsipika aorian'io vanim-potoana io, dia tsy maintsy ampiharina izy ireo. Mbola tsy fantatra aloha hatreto ny fetra farany ho fampiharana, saingy manantena ireo mpikatroka sasantsasany mba tsy ho dilan'ny faran'ity taona ity izany. Manamafy ny blaogy DYM SUM fa hanome tombony ho an'ny rehetra ny fanafoanana ilay fandraràna sy ny fampiharana ireo fitsipika vaovao.
“Olana kely iray nampiady hevitra teo amin'ireo mpikambana sasantsasany amin'ny vondrom-piarahamonina pelaka, vavy tia vavy, manana taovampananahana roa, nanova taovampananahana, sy eo am-pikarohana ny famantarana fananahana ity fandraràna ity, saingy tsy azo lavina fa manan-danja be ho an'ireo olana hafa izay tokony ho resahana. Mazava ho azy, izany tsy milaza hoe ny fanafoanana ilay fandraràna fivezivezena ho an'ireo mitondra ny tsimokaretina dia tsy hisy fiantraikany fotsiny eo amin'ity vondrom-piarahamonina ity fa ihany koa amin'izao tontolo izao.”
Sarinà fiaramanidina iray miantsona, nalain'i Steven Fernandez ary navoaka teo amin'ny Flickr.